Chicken kechie ụtọ nduku - Goodao Technology Co., Ltd.
Chicken jerky na poteto dị ụtọ bụ ihe nri abụọ kachasị ewu ewu bụ ezigbo na ahụike. Ngwọta ahụ enweghị ọka, ọka wit, soy ma ọ bụ gluten. Ngwọta a na -atọ ọchị abụghị rawhide na ụtọ nduku na -eme ka ọgwụgwọ ahụ dị mfe ịgbari. Nkịta niile ga -enwe ọmarịcha ọgwụgwọ a, ọ dịkwa mfe ịwụnye ya n'ime obere iberibe maka obere anụ ụlọ.
Abụba Crube: 1.5% max
Fiber Crube: 4.5% kacha
Aha ngwaahịa Ọkụkụ kechie Ọtọ Ntọala
Ngwaahịa bụ isi ihe Ọkụkọ, ụtọ nduku
Anyị na-agbaso usoro nchịkwa nke “Ogo kacha mma, Ọrụ kacha elu, ewu ewu bụ nke mbụ”, ọ ga-ejikwa obi eziokwu mepụta ma kesaa ndị ahịa niile ihe ịga nke ọma maka 100% Original China Organic Soft. Chicken Kechie Nduku Ụtọ Pet Treats Dog Dry Food, Anyị na -anabata ndị ahịa ọhụrụ na ndị agadi ịkpọtụrụ anyị site na ekwentị ma ọ bụ zitere anyị ajụjụ site na mail maka mkpakọrịta obere azụmahịa ogologo oge wee nweta ihe ịga nke ọma.
100% Original China Dry Pet Food na Dry Pet Treats ọnụahịa, ụlọ ọrụ anyị na -agbaso echiche njikwa nke "debe ihe ọhụrụ, na -achụso mma". N'ịdabere n'ịhụ na uru nke ngwa ahịa dị ugbu a, anyị na -anọgide na -ewusi ma na -agbatị mmepe ngwaahịa. Companylọ ọrụ anyị na-ekwusi ike na ihe ọhụrụ iji kwalite mmepe na-adigide nke ụlọ ọrụ, wee mee ka anyị bụrụ ndị na-eweta ngwaahịa dị elu.
Nke gara aga: Pressed ọkpụkpụ 10 cm na apịtị ọkụkọ
Osote: Sanwichi mkpọ ọkụkọ
Chicken Kechie Nduku Ụtọ